Apple inosimbisa kuti yakasiya iyo kernel yeIOS 10 isina kunyorwa | IPhone nhau
Apple inosimbisa kuti nemaune yakasiya iyo iOS 10 kernel isina kunyorwa
Vhiki mushure mekutanga kweiyo beta yekutanga yeiyo inotevera vhezheni yeApple's mobile operating system, MIT yakawana kuti avo vaive muCupertino vasiya iOS 10 tsanga isina kunyorwa. Kubva panguva iyoyo, nyanzvi nevashandisi vakatanga kufungidzira vachiedza kufungidzira chikonzero nei Tim Cook nekambani vanga vaita sarudzo iyi, vachiuya kuzoongorora mukana wekuti mumwe munhu akarova kusvika pasi, asi izvi zvakaratidzika kunge zvisingaite nekuti zvingave zvakakomba kukanganisa.
Nezuro, Chitatu, Apple yakataura uye yakapa zvikonzero nei yakasiya kernel yeIOS 10 isina kunyorwa. Chikonzero chikuru ndechekuti optimize system performance. Uye ndeyekuti iOS 9 yakavharidzirwa kubva kumusoro kusvika kumagunwe uye izvo zvinoita kuti sisitimu yekushandisa itambure. Zvichienderana nezvakataurwa uye nerangu ruzivo, iOS 1 beta 10 inofamba zviri nyore kupfuura iOS 9.3.2, saka zvinoita sekunge zvavari kuyedza kuita nekusavanza iyo iOS 10 kernel iri kushanda.
Iyo iOS 10 kernel haina ruzivo rwakashata
Chikonzero chechipiri, chiri kuwedzera kwekutanga, ndechekuti iyo iOS 10 kernel haina ruzivo rwekuvanzika, saka haidi kuverengerwa.
Iyo kernel cache haina chero ruzivo rwemushandisi, uye nekubvisa kunyorera isu tinokwanisa kukwidziridza mashandiro ehurongwa hwekuita pasina kukanganisa kuchengetedzeka.
Kusvika parizvino, Apple yakanyora kernel kuchengetedza kodhi yayo kubva pakuedzwa kusingadiwe kana kudzosera huinjiniya, iyo yekupedzisira ichinyanya kuitwa nemutemo. Ngozi diki, iyo Apple inoti haipo, iri shoma kwazvo kupfuura iyo inogona kubatsirwa.
Seizvo nyanzvi dzekuchengetedza dzinoti, danho razvino reApple rinotendera vatsvagiri vezvekuchengetedza kuti vanyatsomira mumoyo weIOS kekutanga. Chikamu chakanaka ndechekuti White Hat kana Nguo chena ivo vanozokwanisa kutsvaga zvimwe zvinokuvadza, taura kuApple uye avo veCupertino vanozoziva kukundikana nekukurumidza. Kuzvitarisa nemaonero, kunyangwe kana izvi zvichireva kuti "vanhu vakaipa" vanogona kuwana zvikanganiso izvi zvakare, vashandisi vane ngozi vangangodaro vasina nguva yekushandisa njodzi iyo "vakomana vakanaka" ichawanawo, pamwe kunyange pamberi pavo.
Zvakare, izvi zvakare zvichakuvadza musika we Grey ngowani, Havasi vakanaka kana vakaipa vanoba vanozopedzisira vatengesa kusagadzikana kumasangano ehurumende, chaizvo zvakaitika muchiitiko cheSan Bernardino sniper's iPhone 5c. Kana iyo kernel yeiyo iPhone yakanga isina kunyorwa, zvingangoita kuti iko kushandisa kwakashandiswa nevaseki kungadai kwakawanikwawo neGrey Hats neApple vangadai vakazvigadzirisa vasati vaishandisa.
Sezvauri kuona, ndiri kuyedza kutsvaga chikamu chakanaka cheichi. Kana nyanzvi dzekuchengetedza neApple vachiti zvakakosha, vanofanirwa kunge vachitaura chokwadi. Zvakare, vhiki ino ndakaverenga chirevo mune svikiro chakayeuka izvo Ubuntu haina kernel encryption chero uye ndiyo imwe yenzira dzekuchengetedza dzakachengeteka kwazvo pasi rose. Unozviona sei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Apple inosimbisa kuti nemaune yakasiya iyo iOS 10 kernel isina kunyorwa
Inopfuura zana mibvunzo inonakidza yekubvunza Siri
Nakidzwa nenzvimbo neyepamutemo NASA app